Board Ukufudukela kokubuza imibuzo ephosakeleyo ukumisela ukuba ungumKristu | Apg29
Xa obaleke abathi kuguqukela kubuKristu njengesiseko yokuhlala lwabo besebenzisa iBhodi Imfuduko kuquka iikhwizi ukuze ufumanise ukuba ukuguquka kwazo lolokwenene. Apha Mandidwelise imibuzo efana 12.
Uninzi le mibuzo bangakwazi ukuphendula, kunye nokungaphumeleli kwawo ngokupheleleyo xa okunene lufuneka kuphela umba ukufumanisa ukuba umntu ngumKristu okanye hayi.
Ndakhe zilondolozwe iminyaka engama-35 kwaye akakwazi ukuphendula inkoliso imibuzo. Kodwa umba loqobo alinjalo, ndimphendule!
Imiba wokuthuthwa Board ubuKristu
Le mibuzo 12 apha zithathwe unedan ukusuka kwimizuzu oko iNkonzo Immigration ucela owaguqula * ukuphonononga ukuba ngokwenene amaKristu ukuba. (* Andiyithandi igama elithi "amaguquka", endiya ukuchaze ngakumbi phantsi kwinqaku wam.)
Dwelisa imithetho elishumi.
Ngaba usixelele kancinci malunga noko kubhaliweyo kuMateyu 10:34?
Zingaphi iindawo luqulathe iTestamente Entsha?
Ziziphi yinxalenye Xikhongelo yeBhayibhile weNkosi? Iye na inani?
Yintoni umahluko phakathi yobuProtestanti kunye neCawa Orthodox?
Chaza kwimibhiyozo kunyaka ibandla.
Yintoni esalelweyo yi ubuKristu?
Chaza oko kwenzekayo ukusuka Maundy ngoLwesine ukuya ngeCawa yePasika.
Njani ukuqonde imbali ubundlobongela wobuKristu?
Yintoni umahluko phakathi ibandla mission ngayo kwamanye amabandla kaThixo, Pentecostal kunye Swedish Church?
Njani na ukuba iTestamente Entsha baziintshaba kakhulu amabhinqa?
Umthombo yemiba, Ndiyifumene i " Ngaba I ngumKristu ngoku? " Apho unako kwakhona ukuthatha uvavanyo. Ndakhe zilondolozwe iminyaka engama-35, kodwa andikwazi kuma uvavanyo, ngoko ke andikhange awukhathazeki ngayo.
Le mibuzo uvavanyo okubi ebuzwa imibuzo kuba impendulo kubo ntoni na ukuqinisekisa ukuba ungumKristu okanye akunjalo. Inyaniso kukuba kuthatha kuphela udaba olulodwa egqiba ukuba ungumKristu okanye hayi nokuba:
- Xana Yesu iNkosi?
Ukuba impendulo yakho nguewe kulo mbuzo kwaye bakholelwa ukuba uThixo wamvusa ekufeni lo Yesu igcinwa.
Yintoni egqibayo enoba lobuKristu okanye akunjalo, kukuba ufumene uYesu njenge Nkosi ubomi babo. Ukuba anazi, ngoko akukho ungumKristu, okanye asindiswe, njengokuba iBhayibhile ithi. Akuyi kusindiswa okanye umKristu kuba wena iqashiso ulwazi, kodwa ukuba uye wafumana uYesu njengeNkosi.
IBhodi Ukufudukela yenza akukho nomnye umbuzo kwi uviwo ukuba bafumene uYesu ngokholo kuye. Uninzi mibuzo ingasentla okujikeleze imiba musa Akukhathaliseki ukuba ukwazi ukuphendula okanye hayi.
Andiyithandi yelaseAkaya elithi
Kule meko, omnye uthetha "iguqula 'kunye nabantu abangenagama abaye kuguqukela kubuKristu. Andiyithandi ilizwi ukuguqula kuba ndicinga ukuba elahlekisayo.
It is not about ukuguqula nayiphi inkolo, ezifana ubuKristu, kodwa imalunga ukuba ufumene umntu ophilayo uYesu Kristu uyiNkosi!
Kukho umntu aphile ukuba ufumana - Akukho nkolo. Iinkonzo ziye zange akwazi ukugcina, kodwa umntu kaYesu Kristu uyawukhulula kwaye igcina ngokwenene nangokufanelekileyo!
Ngxatsho ukuba ubutyhile imiba
Ndicinga Micael Grenholm yenye lwabasunguli apapasha uvavanyo kwi-intanethi yaye ngaloo ndlela ibonisa ukuba uhlobo lwemibuzo ebuzwa. I ucinga kwenziwa kakuhle kakhulu ukuze achaze imibuzo ezitenxileyo wabuza xa kukho umbuzo omnye kuphela ekufuneka wabuza: